WQGS Submersible tsvina Pump - China Shanghai SOG Pumps
WQGS Submersible tsvina Pump
CDLF Vertical Multistage Stainless Steel Centrifugal ...
CHL Horizontal Multistage Stainless Steel Centrifuga ...
WQGS uye GWQ akatevedzana asiri kuzadza anyatsofukidzwa injini pombi vari zvachose yakagadzirwa, kugadzirwa uye akaedzwa maererano hama nyika mitemo, ivo zvinoshanda kuti zvebhizimisi tsvina mvura, zuva tsvina mvura, abudise gadziriro guta tsvina mvura.
Tumira neindaneti kwatiri Catalogue Download
Max. Kuyerera: 300m³ / h
1. Ambient tembiricha: 0-40 ℃
2. Maximum mvura tembiricha + 40 ℃
3. ph pamwero kubva 4-10
4. Maximum mvura arambe achirema 1,2 * 10kg / m³
5. Simba maitikiro ndiye 50Hz. Chezita voltage ndiye 220VAC nokuda kuroora kutotanga
Uye 380VAC matatu danho pamwe zvinobva -100% 10%.
6. kunyudza udzamu kubva 0.5m-5M
WQGS dzino asiri kuzadza anyatsofukidzwa injini pombi zvinoshanda kuti kuerera zvakakomba yakasviba tsvina mvura mumafekitari uye zvokutengeserana nzvimbo, tsvina zvikasabudiswa yeredhiyo chokugara nharaunda, abudise maitiro muguta tsvina mumvura kurapwa chirimwa, zvikasabudiswa chiteshi wehurumende kudzivirira, mvura iri pombi mvura chirimwa, tsvina zvinoyerera muzvipatara hotels, kuvakwa nzvimbo pamusoro matunhu neminisiparati zvirongwa, ubanguranyika, zvimbambaira, mumaruwa methane dziva, okurima kudiridza etc. To anunure tsvina mvura uye Zvinosvibisa ine granules, uyewo mvura yakachena uye kungatikanganisa nemasvikiro.
1.Insulation kirasi: F
2.The mvura nemishonga impeller pamusoro QT 450-10 zvinhu.
3.Stainless simbi mugodhi uyewo, carbide miviri -sides zvokuimba chisimbiso.
4.Double gwara impeller, akanaka aibuda vanokwanisa, chakanakisisa hydraulic unongotaura.
Opsioneel Available pamusoro Request
Other voltage kana maitikiro ndiyo 60HZ
nhamba mhando kuyerera Hydraulic musoro RPM Voltage simba urefu
(M³ / h) (M) (R / Nha) (V) (KW)
Installation ndeiya yakaita yokukweva WQGS (GWQ) dzino non-pedyo wakaiswa anyatsofukidzwa motokari pombi.
Installation, Operation uye Maintenance Mirayiridzo:
● It chinorambidzwa kudzura netambo nechisimba muna chokugadza kubviswa yemagetsi Pombi kudzivisa waya ichipaza uye vadyi delinking vatungamiriri chaiko nokushanda kutadza uye kunyange Uchipisa;
● Ndapota nechokwadi akarurama uye yakavimbika waya earthing mu kugadzwa yemagetsi pombi. It chinorambidzwa vanhu kana mhuka kutaura operative mvura nzvimbo kana kubata yemagetsi pombi kana kushanda. Kuti kuderedza yemagetsi kuvhunduka ngozi, inogona chete kwakabatana earthing chivhariso;
● zadzisa oparesheni chinorambidzwa;
● The netambo chokuita pombi hazvifaniri asingasviki 1.2 nguva yemagetsi pombi nzvimbo;
● The yemagetsi Pombi inofanira kupinda mukati installation. Asi netambo hazvigoni kusimbiswa kana tenderera pamwe yemagetsi pombi kamwe zvinonzi zvakatanga;
● Kana pombi Haibudisi mvura mukushanda, yemagetsi pombi inofanira kuongororwa kuti chero neizvi Kutenderera kana check vharuvhu pamvura nzira yokubudisa muromo inofanira kuongororwa kuti chero residual mhepo;
● Pasika-to-danho uye hama pasi-kuti-pasi kuputira kuramba ari injini ine yemagetsi Pombi inofanira iongororwe nguva dzose pamwe nemishonga hapana kudzika kupfuura 2MΩ. Zvikasadaro, midziyo inofanira disassembled rokuongorora uye kugadzirwa;
● Mushure hafu gore kwomuzvarirwo kushanda pasi waiti kushanda ezvinhu, yemagetsi pombi inofanira kuongororwa kuti mafuta kamuri rakavhara ezvinhu. Kana mafuta emulsified kana sedimented mvura inobuda, 10 # muchina mafuta uye zvokuimba chisimbiso nhengo dzinofanira kutsiviwa mune nenguva nenzira;
● Mumwe pamwero mukuru rokugadzirisa basa rinofanira kuitwa pashure kuipa kushanda kuti gore rimwe: dzezvipfeko zvikamu aifanira kutsiviwa, fasteners zvinofanira iongororwe uye mafuta zvinofanira vaisanganisa uye kutsiviwa kuitira lubrication kwazvo mune kuipa oparesheni;
● Tapota kuchenesa yemagetsi pombi ndidzime marozari kana kwete kushandiswa.
Atadze kushanda zvakanaka Analysis uye kubviswa
atadze kushanda zvakanaka chikonzero ongororo kubviswa nzira
rwakakwana kuyerera kana pasina mvura 1.mistaken chipande chinhu chinja chero mbiri danho kutevedzana simba nematunhu
2.openness uye kukwana nzira yokubudisa vharafu kuongorora vharafu
3.left mhepo iri zvikwepa pakati vharuvhu uye pombi kunoita zvakaoma kuvhura vharuvhu tiite mhepo iri pombi
4.too yakaderera kutenderera nokukurumidza tarisa simba anopa voltage dhigirii
5.excessive Rin'i abrasion tsiva
6.high arambe achirema kana viscosity iri mvura kushandura arambe achirema uye viscosity emura
7. nenyere uye chisvo blockage kubvisa zvipingamupinyi zviri nenyere uye mashizha
kusagadzikana yemagetsi pombi oparesheni 1.blade kusaenzana kutsiva kana tekenya vhiri BALANCInG
2.bearing dhemeji tsiva
3.overload oparesheni chinja vharafu kudzivisa yemagetsi pombi zadzisa
4.sliding chokugadza kugadzwa zvakare
yakaderera kuputira musimbwa 1.leakage ari wiring kuguma waya uye simba nematunhu varibatanidze kutsikirira nzungu zvakasimba
2cable waya zvakakanganisika kana mvura kupinda kubva mumusoro tsiva
3.mechanical chisimbiso abrasion tsiva
4.O-zvakaumbwa Rin'i vakwegura uye kutadza tsiva
kunyanya kuitika 1.low kushanda voltage chinja kushanda voltage
2.blade blockage kana aina-up zvipingamupinyi yakachena nenyere uye mvura
3.high arambe achirema kana viscosity iri mvura kushandura arambe achirema uye viscosity emura
4.excessive vharafu kubudirana pachena chinja vharafu kubudirana pachena
Previous: factory Outlets for Iso9001 300l Duplex Pickling Stainless Steel Water Tanks
Next: high quality stainless steel centrifugal pump for high rise building booster
kuzadza Free tsvina Pump
No mhingaidzo tsvina Pump
Non-ichivharira tsvina Pump
tsvina Pump nokutengesa
S ewage Water Pump
Submersible mukuyi tsvina Pump
Submersible tsvina Pump
Wqk tsvina Pump
WQGS Hot Sell 2 Inches Submersible centrifugal ...
TD TPTG inline circulation single stage centri...
single stage submersible water motor pump for w...
Chl Industrial Horizontal Multistage Centrifuga...